macOS, tvOS နှင့် watchOS တို့သည်ထပ်ဆောင်း update ကိုရရှိသည် ငါက Mac ပါ
macOS, tvOS နှင့် watchOS တို့သည်ထပ်ဆောင်း update ကိုရရှိသည်
Ignatius ခန်းမ | | MacOS US မှာရှိတဲ့ Mojave, NOTICIAS
မနေ့ကနေ့လည်ခင်းတွင် Cupertino မှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ operating systems အားလုံးအတွက် update အသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် iOS 12.4 jailbreaking ဖြစ်နိုင်ချေကိုပိတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း bug ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ iOS 12.3 ဖြန့်ချိမှုကြောင့်ပိတ်ခဲ့ရသည်။
သို့သော်နားမလည်နိုင်သည့်အချက်မှာ iOS 12.4 ဖြန့်ချိမှုကြောင့်ထို exploit သည်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် iOS 12.4 မှစီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် device အားလုံးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော Apple ထက် jailbreak ဖြစ်နိုင်သည်။ iOS အတွက် update အပြင် Apple သည်လည်း update တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သင်၏စက်ပစ္စည်းများ၏ကျန်များအတွက်ဖြည့်စွက်ရမည်။
iOS 12.4.1 နှင့်မတူဘဲကျန်တဲ့ operating system များမှာသေးငယ်သော update ကိုလက်ခံရရှိပြီး၎င်းသည်သေးငယ်သော operating bugs များကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေထပ်ထည့်မယ့်အစား iPhone, Apple Watch, MacBook ၏မျိုးဆက်သစ်များကိုတင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်စက်တင်ဘာလလယ်တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့်နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်အချိန်တိုအတွင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
MacOS အတွက် Apple ဖြန့်ချိလိုက်သော update ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။
MacBook ပြBookနာရဲ့အဖြေ အခါခေတ္တပိတ်ပါ.
ကြောင်းပြanနာကို Fixed စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့နည်းစေသည် သငျသညျကြီးမားသောဖိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသောအခါ။
စာမျက်နှာများ၊ မှတ်စု၊ နံပါတ်များ၊ iMovie နှင့် GarageBand မှတားဆီးထားသောပြနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည် ကို update လုပ်လိမ့်မည်.
Apple operating systems များအားလုံးရရှိထားသောနောက်ဆုံးသတင်းစာသည်နောက်ဆုံးရရှိသောနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခင်စာပိုဒ်၌ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကျန်ခဲ့သောကြောင့် နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြန့်ချိသည် Apple သည်ဇွန်လတွင်တရားဝင်တင်သွင်းပြီးကတည်းကလက်ရှိ beta တွင်ရှိနေသော operating system တစ်ခုချင်းစီကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » macOS, tvOS နှင့် watchOS တို့သည်ထပ်ဆောင်း update ကိုရရှိသည်
feris viuler ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက Mac မှာသင့်မှာသိမ်းထားချင်တဲ့၊ မွမ်းမံလိုတဲ့ operating system တစ်ခုရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်၌ပြproblemနာတစ်ခု ရှိ၍ ပြန်လည်ထည့်သွင်းလိုလျှင်၎င်းသည်helpရာမရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
feris viuler အားပြန်ကြားပါ
Pastebot သည်နောက်ဆုံးပေါ် macOS Mojave အမှောင်စနစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်